समितालाई किन शिल्पाको बहिनी भनेको मन पर्दैन ? भन्छिन्, शिल्पाको बहिनी भएर मैले धेरै दुख पाएँ – Jagaran Nepal
समितालाई किन शिल्पाको बहिनी भनेको मन पर्दैन ? भन्छिन्, शिल्पाको बहिनी भएर मैले धेरै दुख पाएँ
Jagaran Nepal सोमबार, साउन ३२, २०७८
एजेन्सी । बलिउड नायीका शिल्पा सेट्टीको बहिनी शमिता शेट्टी बिग बोस ओटीटी को शुरुवात देखि नै हेडलाइन्स मा छन्। यो रियालिटी टिभी शो को आइतवार को एपिसोड मा, उनले आफ्नी दिदी शिल्पा शेट्टी को बारे मा खुलाइन् ।
शमिता शेट्टी भन्छिन् कि शिल्पा शेट्टीकी बहिनी हुनु उनको लागी सजिलो थिएन। होस्ट करण जोहरले शोमा शमिताको खेल र उनको व्यवहारको प्रशंसा गरे। शमिता शेट्टीले भनिन् कि फिल्म उद्योगमा २० बर्ष उनको लागि सजिलो थिएन र उनी सधैं आफ्नी दिदी शिल्पा शेट्टीको छायामा रहनु पर्यो ।
उनले भने कि फिल्म उद्योग मा २५ बर्ष को धेरै कठिन यात्रा भएको छ। एक व्यक्ति को रूप मा म अधिक आत्मविश्वासी छु। मानिसहरु मलाई शिल्पाकी बहिनी शमिता शेट्टी भनेर चिन्छन्। यो एक सुरक्षात्मक छाया हो। म भाग्यमानी छु शिल्पा शेट्टीको छाया पाउनको लागी, तर मानिसहरु मलाई साँच्चै चिन्दैनन्।
जब देखि बिग बोस ओटीटी शुरू भयो, शमिता शेट्टी को उनको साथी प्रतियोगीहरु संग विवाद भएको छ। दिव्या र निशांत भट्ट संग उनको झ ग डा भएको छ। दिव्याले उनलाई बोसी पनि भनिन्। शमिताले यस अघि तीन रियालिटी शो गरिसकेकी छिन् र बिग बोस ओटीटी उनको चौथो रियालिटी शो हो। उनले बिग बोस ३, झलक दिखला जा र फियर फ्याक्टर खतरों के खिलाडी। मा काम गरिसकेकी छिन्।
आइतबारको एपिसोडमा, करण जोहरले शमिता शेट्टीलाई धेरै समर्थन गरे, जसको कारण उनी प्रयोगकर्ताहरुको ट्रोलको सामना गर्नु पर्यो। प्रयोगकर्ताहरुले उनीहरुलाई पक्षपाती पनि भने।
शमिता शेट्टी र अक्षरा सिंहको पनि शो मा झ ग डा भएको थियो। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा शुरू बाटै शमिता लाई मन पराउँदिनन्, यो शो मा स्पष्ट देखिने छ। अक्षराले शमितालाई आफ्नी आमाको उमेरको भन्दै टिप्पणी गरिन्। यति मात्र होइन, उनले अभिनेत्रीलाई आन्टी पनि भनिन्। यस पछि, कमाल खान यस ल डा ई मा उफ्रिए र सोशल मिडिया को माध्यम बाट शमिता लाई ४८ बर्षको भने।
के तपाई पत्याउनुहुन्छ ? आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सुत्र के हो भनेर
नाइटोमा गहना झुण्डाउने सुन्दरीहरू, पियरसिङ कति सुरक्षित